Mkpụrụ nke ASIC ibe site Samsung - Blockchain News
Mkpụrụ nke ASIC ibe site Samsung
Samsung malitere amị ASIC ibe maka Ngwuputa nke cryptocurrency
Isi osompi nke ụlọ ọrụ na nke a ahịa na-akpata na Ngwuputa ngwá ruo $ 400 nde ke a nkeji iri na ise.
South Korean Samsung e aku na mmepụta nke ASIC ibe, nke na-eji maka mmepụta nke bitcoins, ethers na ndị ọzọ na cryptocurrencies. Nke a na-e dere site TechCrunch na-adịrị ndị nnọchiteanya nke ụlọ ọrụ.
Samsung bụ ugbu a ọrụ n'aka n'ichepụta ibe maka thecryptocurrency. Otú ọ dị, we can not give more details about our customers. – Samsung PressOffice
The mbụ banyere ọrụ nke Samsung n'elu ibe maka miners kọrọ site na Korean media. Dị ka obodo mbipụta The Bell, uka mmepụta nke ASIC ibe na Samsung okporo ọkụ osisi malitere na January 2018. Isi mmalite na-ekwu na ụlọ ọrụ esesịn kwetara na ọkọnọ nke Ngwuputa ngwá maka-akpọghị aha ụlọ ọrụ si China.
The nnọchiteanya nke Samsung jụrụ ịgwa TechCrunch nkọwa nke ọrụ na ASIC ibe.
The akwụkwọ na-ekwu na Samsung nwere mpi na Taiwanese microchip emeputa TSMC, nke na-akpata na ngwá maka Ngwuputa si $ 350 nde $ 400 nde maka nkeji iri na ise. The ụlọ ọrụ na-eje ozi dị otú ahụ isi suppliers nke na Ngwuputa akụrụngwa dị ka Bitmain na Canaan Creative.
Ịgbaso ihe 2017, Samsung ghọrọ ndị kasị ibu mgbawa emeputa, displacing si ọnọdụ nke onye ndú nke Intel. Samsung azụmahịa na microchip mmepụta 2017 bụ $ 69 ijeri tụnyere Intel si $ 62.8 ijeri.
Ethereum Foundation mara ọkwa na nnata nke "mbụ ife nke enyem" nke $ 2.5 nde
Dị ka a kọrọ na o ...
Korean ọchịchị f ...
Previous Post:Olee na-eduzi ihe ICO na Switzerland
Next Post:MasterCard si CFO: Cryptocurrency ịzụrụ na-boosting anyị ahịa emefu